जो’*डी नभएकाहरुलाई को’#रोना भा*’इरसबाट मृ’#त्यु हुने खत’*रा धेरै’ – AB Sansar
October 12, 2020 adminLeaveaComment on जो’*डी नभएकाहरुलाई को’#रोना भा*’इरसबाट मृ’#त्यु हुने खत’*रा धेरै’
एजेन्सी । विश्वभर महामारकिो रुप लिएको को’रोना भा’इरसका विषयमा विभिन्न देशमा विभिन्न शोध तथा अध्ययन भइरहेका छन् । यसैबीच भएको एउटा नयाँ अध्ययनले अविवाहित व्यक्तिमा त’नाव थपिदिएको छ ।को’रोना म’हामारीसँगै विवाहित जीवन स्वस्थ जीवनको लागि आवश्यक भएको छ ।
महामारीको सं’कटकालमा यो तर्क सत्य साबित हुन सुरु भएको छ । नयाँ अध्ययनका अनुसार को’विड १९का कारण अविवाहित व्यक्तिहरुमा मृ’त्यु हुने जो’खिम विवाहितहरुको भन्दा बढी छ । स्विडेनको स्टकहोम विश्वविद्यालयका शोधकर्ताले यसबारे चे’तावनी पनि दिएका छन् । *******थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’,****
स्टकहोम विश्वविद्यालयका अन्वेषकहरूले अविवाहित व्यक्तिहरु सहित कोरोनाका कारण हुने मृ’त्यु हुने सम्भावना कम आय, कम शिक्षित र कम वा मध्यम आय भएका देशहरूमा बढी हुने दा’वी गरेका छन् । अध्ययन स्विडेनको नेसनल बोर्ड अफ हेल्थ एण्ड वे’लफेयरमा दर्ता भएको स्वीडेनको कोविड १९ को तथ्यांकमा आधारित छ । ’
जनरल नेचर क’म्युनिकेसन’ मा प्रकाशित यस अध्ययनका लेखक स्वेन ड्रे’फ्हलकाअनुसार कोभिड १९ बाट हुने मृ’त्युसँग धेरै ठूला तथ्यहरु जो’डिएको छ ।उक्त रिपोर्टअनुसार अविवाहित व्यक्तिहरूमा कोभिड १९ का कारण मृ’त्युको जो’खिम विवाहित व्यक्तिमा भन्दा डेढदेखि दुईगुणासम्म बढी हुने गरेको छ ।
यो सूचीमा अविवाहित, एकल महिला तथा पुरुष र सम्बन्ध वि’च्छेद भएका व्यक्तिहरू पनि रहेका छन् ।प्र’तिवेदनमा कोभिड १९ का कारण पुरुषमा मृ’त्युको जो’खिम महिलाको तुलनामा दुई गुणा बढी रहेको अर्को ठू’लो दा’बी पनि गरिएको छ । यसअघि केही अध्ययनमा एकल वा अविवाहित मानिस विभिन्न रो’गका कारण बढी मर्ने तथ्याङ्क रहेको भनिएको थियो ।
ड्रे’फ्हलकाअनुसार अविवाहित व्यक्तिले विवाहित जोडीभन्दा कम सुरक्षित वातावरण प्राप्त गर्दछ । त्यसकारण, विवाहित जोडीहरू अविवाहित मानिसहरु भन्दा कम बि’रामी हुन्छन् र स्वस्थ जीवनको आ’नन्द लिन सक्दछन् । ******थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’,****
खेलाडी परिवर्तन गर्दा पनि दिल्लीको टीममा किन पर्दैनन् सन्दीप ?
लगातार बढेर लाख पुगेको सुनको मुल्य, आज सोच्नै नसकिने गरि यस्तो भयो !
रा*ती साथीको कोठामा पुगेकि यी युवती, जस्ले क*ल्पना पनि ग*रिनन् यस्तो होला भन्ने !